Burmese taste - Iora: ချစ်သူနှင့်ပတ်သက်သောအပိုင်းအစများ ၂
မြတ်ကြည် August 31, 2014 at 11:04 PM
ခုတော့ မသိသေးဘူး။ ယူကြည့်မှ သိမယ်တူတယ်။ :P
Iora September 1, 2014 at 7:56 AM
ပြုံးပန်း August 31, 2014 at 11:09 PM
ကျွန်မတောင် အဲသလိုလေး ရေးချင်လာတယ်၊
ကျွန်မတို့ကတော့ အရင်လိုနဲ့ အခုတော့ မတူဘူး၊ ပုံစံကွဲသွားတာလို့ ပြောလို့ ရတယ်
Iora September 1, 2014 at 7:58 AM
ကုိုယ်ကတော့အပြုံးပန်းရေးသမျှဖတ်လို့ ရသလောက်ဖတ်တာဆုိုတော့ အဲလိုလေးရေးရင်လည်းအပြေးလာဖတ်မှာပါလို့ ။
ပြုံးပန်း September 1, 2014 at 11:12 PM
ကျေးဇူး၊ အားပေးတဲ့သူရှိလို့ ရေးအုံးမယ်၊
Ma Tint September 1, 2014 at 12:49 AM
အိမ်ထောင်သက် ၃၁နှစ်ကျော်အထိတော့ မပြောင်းလဲသေးဘူး အိုင်အိုရာ.. ဒါဆိုတီတင့်ကို ကွန်ဂရက်စ်လုပ်တော့နော် ဟာဟ… ချစ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အပိုင်းအစလေးတွေ ဆက်မျှော်နေတယ်..
Iora September 1, 2014 at 8:04 AM
သူ့ ကုိုတီတင့် အိမ်ဦးနတ်စီ ပို့ ပြီးသင်တန်းတက်ခိုင်းရကောင်းမလား။ ဟင်း..ဟင်း..
အားပေးတဲ့သူတွေများလာတော့ ဖီလင်လာရင်လာသလိုဆက်ရေးဖြစ်ဦးမယ်ထင်ပါတယ်။း)
အိမ်စိုးမေ September 1, 2014 at 1:35 AM
ဖတ်ရင်းနဲ့ ရေးချင်စိတ်တွေတောင် ဖြစ်လာတယ်။ 2ယောက်ထဲချင်းတူလို့လေ။ မအိုင်အိုရာကို မမီးငယ်နဲ့ စန်းထွန်းတို့ရဲ့ စာတွေ သွားဖတ်ရင်း ကွန့်မန့်တွေ တွေ့နေပေမဲ့ တခါမှ အလည်မလာခဲ့ဖူးဘူး။ ရေးဘို့ ကြိုးစားဦးမယ်ရှင်
Iora September 1, 2014 at 8:08 AM
လာလည်ပြီးဖတ်သွားကွန်မန့် ပေးသွားလို့ ကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာပါတယ်။
ရေးတဲ့အခါလာဖတ်မယ်နော်။ ဖတ်ရင်းနဲ့ ရေးချင်စိတ်တွေတောင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့
ပြုံးမိတယ်။ ကုိုယ်လည်းဒီကွန်မန့် လေးဖတ်ရင်းနဲ့ ထပ်ရေးချင်စိတ်တွေတောင်ဖြစ်လာတယ်။း)
အိမ်စိုးမေ September 1, 2014 at 9:14 PM
ဟီးဟီး တကယ်တော့ ဂျူါ် ရဲ့ ဇတ်ကောင် နာမည်လေ ကြိုက်လွန်းလို့ပါ ။
စူးနှယျလေး September 1, 2014 at 3:12 AM
ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ မမအိုင်အိုရာရယ်... ရေးတတ်ပါ့... အဲဒါဖတ်မှ ဒီကရော ဘယ်လိုလဲဆိုတာ စဉ်းစားပြီးနှိုင်းယှဉ်ကြည့်နေရတယ်။ ဈေးဝယ်ရင်လည်း ဒီက ကြုံရတာက တမျိုး..နောက်မှပဲ ကိုယ့်ထဲ ပို့စ်တင်မယ် စိတ်ကူးတယ်။ ဖတ်မလားဟင် :D
Iora September 1, 2014 at 8:10 AM
ပို့ စ်တင်ရင်လာဖတ်မှာပေါ့။ အမြဲအားပေးနေတာကို။
ဖွန့် မတူတာကိုစိတ်မှန်းနဲ့ ရအောင်ဖတ်သေးတာ။း)
မိုးငွေ့........ September 1, 2014 at 3:21 AM
ချစ်စရာပို့စ်လေး....း) စာအရေးသိပ်ကောင်းတာကို ခနခနအဲလိုပို့စ်လေးတွေတင်ပါ...ငယ်တုန်းက အကြောင်းလေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့...။
Iora September 1, 2014 at 8:14 AM
ချစ်စရာကွန်မန့် လေးး)
ဘယ်သူမှမမြှောက်ပေးပဲနဲ့ တောင်ရေးနေတာ ဒီလိုမြှောက်ပေးလို့ ကတော့..ရေးမယ် ရေးမယ်နဲ့ ဖြစ်နေဦးတော့မှာ။း)
shwenyar tharlay September 1, 2014 at 5:30 AM
Iora September 1, 2014 at 8:31 AM
High Five! Tu lite tar A :) I feel like all the points are being mentioned about me and my hubby ha ha.. At first, I was irritated by his behaviours even though I could feel his affection. Now? Oh! I am very used to the situation!
Iora September 1, 2014 at 12:03 PM
When I talked about those kind of stuff withafriend of mine, she also said it happens same thing to her.. She said when men get older they also change their habit. I don't know. We were laughing by sharing similar conversations between us and our hubbies.
Thanks for visiting and commenting very friendly.
I invite you to visit me whenever you have time.
စံပယ်ချို September 1, 2014 at 10:39 AM
ဘယ်နေရာရောက်ရောက် မုန့်ဟင်းခါးကိုကောင်းကောင်းချက်ပြီးရောင်းတဲ့ မြန်မာဆိုင်မတွေ့ဖူးသေးဘူးနော်
အိမ်ထောင်သက် ၃၁ နှစ်ဆိုတာနဲလားကွယ် ဆက်လက်ပြီး တွဲတဲ့လက်ဒီထက်ခိုင်မြဲရပါစေသား
Iora September 1, 2014 at 11:24 AM
ဟုတ်တယ် ဂျက်။ ကုိုယ်တုို့ လို မုန့် ဟင်းခါးအရမ်းကြိုက်တဲ့သူတွေမှာကုိုယ်ချက်မှကုိုယ်စားရတဲ့ဘ၀ဖြစ်နေတာသနားစရာနော်။း)
ဟုတ်ဘူး ဂျက်..အိမ်ထောင်သက်၃၁နှစ်က တီတင့်။
၃၁ နှစ်ဆုိုရင်တော့ဘယ်လောက်တောင်ပြောပြစရာတွေများမလဲမသိဘူး။ ဟား..ဟား
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်မယ်ထင်ပါတယ်။း)
မီးမီးငယ် September 1, 2014 at 4:27 PM
Iora September 1, 2014 at 5:52 PM
တူလုိုက်တာ။ တနေ့ ကပဲ ဘောင်းဘီအသစ်ဝတ်လို့ သူ့ ကုိုဘယ်လိုနေလဲမေးတာ အဲလိုဘဲ ဖိနပ်စီးနေတာကုိုယ့်ကုိုလှည့်မကြည့်ပဲကောင်းတယ် ကောင်းတယ် လှတယ်တဲ့လေ။
သက်ဝေ September 2, 2014 at 1:29 AM
အမြဲ အတူတူနေနေရတော့လည်း ကျမကုိုလွမ်းတယ် ဆုိုတာမျိုးတွေ သတိရမိတယ် ဆုိုတာမျိုးတွေလည်း မကြားရတာ ကြာလှပေါ့ တဲ့...
ရေးချင်စရာ တော့ပစ်လေး... ရေးအုံးမယ်.... ဟိဟိ
မနက်က Iora ဆိုတဲ့ brand နဲ့ အကျီင်္လေး ၀တ်တုန်းကတောင် သတိရနေသေးတာ...း)
Iora September 3, 2014 at 6:04 PM
ကုိုယ့်ကိုသတိရတယ်ဆုိုတော့ ခဏခဏအဲဒီအကျီ င်္လေးဝတ်နော်။း)
သက်ဝေ September 5, 2014 at 11:41 PM
Sure... I will wear it quite often bcos it's black color, my fav. <3
Iora September 6, 2014 at 6:09 AM
Then when you wear it please don't forget to remember me. OK! <3
Black is my favorite too. :)
Anonymous September 12, 2014 at 7:47 AM
မမအိုင်အိုရာရေ....မမရေးထားတာလေးက..ချစ်စရာလေး ..ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ ..
စာရေးချင်စိတ်တောင် ဖြစ်လာတယ်..း)
Iora September 12, 2014 at 3:17 PM
မိုးစက်လေးကလည်းချစ်စရာကွန်မန့် လေးရေးတတ်လို့ ဖတ်ရတာပြန်ပြန်ဖတ်ချင်စိတ်ပေါက်တယ်နော်။
ဒီစာဖတ်ပြီးရေးချင်စိတ်ပေါက်တယ်လို့ ပြောကြတယ်နော်။ ရေးလေ။ လာဖတ်မှာပေါ့။